Iindaba zaseNtu-apho abafundi banelizwi
APHA ABAFUNDI BENZE IVANGO
I-GG Freelance Gigs
Izinja zeDow - 2019
Ubuqhetseba babathengi beAmazon
Ukuncitshiswa kwentlungu- Ukubala I-Cream, i-Gel kunye ne-Spray
Uphando lweNtengiso ye-CN
Izikhokelo zokungenisa iiNqaku
I-CN isincedile sandisa iNgeniso nge50%
Emva kokuzama Iinkonzo ezininzi ze-PR Ndafumana i-CN
Fumana ukuba uhlawulwe ukuze uxele iindaba!
Ngenisa ii-Artilces- Shicilela
Isivumelwano seDarPA seZivumelwano kunye neNorthrop Grumman Ukuphuhlisa ii-Interceptors ze-Hypersonic Interceptors zoKhuselo loMoya wase-Amelika-Ngubani uNkuthazo?
UChristina Kitova January 26, 2020 January 26, 2020 UChristina Kitova
DARPA signed a contract with Northrop Grumman valued at $13 million to develop Hypersonic weapons interceptors for American air defense. Currently, the only weapon that is capable of shooting down the Hypersonic systems is a laser gun. With the speed of the light pulse, the gun fires at the current location of the target and ...
Make Electrical Courses a Key to Your Success by Entering the Most Demanding Sector
Chetan Sharma January 26, 2020 January 26, 2020 Chetan Sharma
Do you want to join a new vocational course that can help you in launching your career in the right path? Have you considered becoming an electrician? The work of an electrician includes taking care of a variety of different aspects including that of designing, installing, assembling or testing systems among many others. An electrician’s ...
Pick yoMhleli UChristina Kitova January 26, 2020 January 26, 2020 UChristina Kitova
U-Olê, u-Olê Mister -Ibali likaJorge Jesus kunye noFlamengos
Pick yoMhleli UMiguel Torneire January 26, 2020 January 26, 2020 UMiguel Torneire
Uphando lweNtengiso kunye neNdaba
I-High-Performance Computing (HPC) njengeNtengiso yeNkonzo
Imveliso yokutya kwezilwanyana zasekhayaIzilwanyana ezihambisa ukutya
I-Intanethi yezinto (IoT) kwiCandelo Lezempilo Lwezempilo Luphucula Unxibelelwano
Inkqubo yokuthengisa yabathengi Iimarike ziqhutywa
IMakethi yeNdawo yokuThuthukiswa koLuntu iphakamisa isandla
Imakethi edibeneyo yeNtengiso iphucula ukuSebenza
Imakethi eyiNtloko yoKwakha iiMoto eziLumkileyo
Imakethi yeMetholi kwiDinga
Imakethi yokuSika aManzi ukuThengwa ifumana Okona Kuninzi Kwamaqula e-oyile
Ukukhanya okuKhanyayo kwiMarike yeeToni zeSolar zeThin
Kuphela yi- $ 1 / cofa
Ngenisa Intengiso Yakho Apha
Umanyano lwe-Afrika ukuxoxa ngeNtlekele yaseLibya
Idolophu enkulu yaseCongo, iBrazaville, iza kubamba inkomfa ye-mini-e-Afrika malunga nengxinano yaseLibya nge-30 kaJanuwari, phambi kwengqungquthela ye-AU ecwangciselwe umhla we-9 kuFebruwari. Iza ngexesha apho ikomkhulu laseLibya lingqina…
I-Añez iphakamisa unyulo lweBolivian, ibhengeza ukuba iyaBamba kwi-Ofisi kaMongameli
Bolivia’s interim president, Jeanine Añez, announced her candidacy for the presidency on Friday, in a move that has since provoked criticism from the country’s opposition. Presidential elections in Bolivia are scheduled for May 3. “It was…
I-Erdogan Ibongoza Uxinzelelo olungakumbi kwiHaftar yaseLibya
Turkish President Recep Tayyip Erdogan urged higher international pressure on the military forces in eastern Libya to accept a provisional truce, and said that Turkey remains committed to supporting the Libyan government recognized by the…
Ukuqwalaselwa kwe-OPEC kunciphisa ngaphambili kwintlanganiso kaMatshi
I-OPEC ithathela ingqalelo ukwandiswa kokupheliswa kwayo kwe-oyile de kube sekupheleni konyaka, njengoko iimarike zisajonge ezantsi, kodwa iingxoxo zihlala zisekuqaleni. I-arhente yeendaba ye-TASS yaseRussia icaphule umthombo…
Umphathiswa omtsha waseTunisia akaquki abachasi bakaRhulumente
Inkulumbuso yase-Tunisia yonyule u-Elyes Fakhfakh ngexesha lenkomfa yabezindaba izolo ukuba uzakusebenza ukwenza i-mini-cabinet kunye nomanyano urhulumente odibanisa amaqela axhasa uMongameli Kais Saied kumjikelo wesibini ...
I-Houthi Militia Iphulukana ne-al-Dhalea
Ilahleko yomkhosi waseHouthi yanda ngakumbi ekujonganeni nemikhosi edibeneyo kulawulo lwe-al-Dhale, ngelixa uMkhosi weSizwe uqinisekisa ukuba idabi lokukhulula uSaraa yayiyindlela engenakuphinda iguqulwe. Imithombo yasemkhosini ithe kubaxeli ...
IFransi iqinisekisa iMeko yokuQala yeCoronavirus
UMphathiswa Wezempilo waseFrance uqinisekise amatyala amathathu abantu abosulelwe yiCoronavirus ngolwesiHlanu eveze ukuvela kwesifo esingaqondakaliyo sokuphefumla isifo kwiphondo lase China Hubei. Umphathiswa wezempilo wase-France, u-Agnes Buzyn, ulumkisile ukuba, ngo…
I-UN Iitsalela kwiLebhu eNtsha yaseLebanon ukuya kuQhetseba ngenkohliso
Umnxibelelanisi okhethekileyo weZizwe eziManyeneyo kwiLebanon, uJan Kubis, uxele ukuba ubonile iNkulumbuso-yonyula ubunyani buka-Hassan Diab ekusebenzeni ekuphumezeni utshintsho kunye nokulwa urhwaphilizo. Emva kwentlanganiso izolo, iZizwe eziManyeneyo zagxininisa…
Amawakawaka aqhanqalayo e-Iraq ngokuchasene ne-American Troops
Amawakawaka abantu aphendule kubizo luka-Shiite ongumfundisi u-Muqtada al-Sadr ukuba baqhankqalaze ngolwe-Sihlanu ngokuchasene nobukho bemikhosi yase-United States kumhlaba wase-Iraq. Isithethi safunda ingxelo ka-al-Sadr ngexesha lokwenza umboniso, apho wabiza khona…
Ukufa kweCoronavirus Ukunyuka ukuya kuma-26 eTshayina
Inethiwekhi yaseTshayina yeTV CGTN iqinisekisile ngolwesiHlanu ukuba inani labantu ababhubhileyo ngenxa yekoronavirus entsha kweli lizwe inyuke yaya kuma-26.
Isivumelwano seSudan Sityikitya nabaRhaneli, Iingxaki ziyaqhubeka eKhartoum
Urhulumente waseSudan kunye neqela eliphambili labavukeli batyikitye isivumelwano sangoLwesihlanu, kumalungiselelo ezopolitiko nawezokhuseleko, bevula indlela yesivumelwano soxolelwaniso olupheleleyo ngokuthetha okuqhubekayo phakathi kwamacala omabini. AmaSudan…
Ukubetha kuyaqhubeka eFrance, iKhabhinethi idlulisa impikiswano yePension
NgoLwesihlanu, ikhabhathi yaseFrance yaxoxa yaze yapasa iprojekthi yokutshintsha yepension yaphakanyiswa nguMongameli Emmanuel Macron. Iqela eliphikisayo lolwenyulo lukhethe lo mhla wokulungiselela ugwayimbo kunye nemiboniso. Intloko-jikelele ...
I-Coronavirus: I-China Ihlala abantu abazizigidi ezingama-20, iiCancels zoMthendeleko woNyaka
Ukusasazeka kwe-Coronavirus entsha kuphume ngaphandle kolawulo e-China ngamatyala angama-504 kunye ne-17 yokusweleka. Izixeko ezininzi ezinabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-20 zikhutshiwe, kubandakanya iWuhan, Huanggang,…
UKUGQIBELA: I-China Yilwa I-Wuhan Coronavirus Ngokuchasene nokufika koNyaka oMtsha waseTshayina
Pick yoMhleliUCorey Barro
Ngokukhethekileyo kwinyanga enye ukuqhuma kwayo, i-coronavirus entsha ye-Wuhan sele ibangele abaguli abangama-644 baqinisekisile ukuba banesifo, i-422 yamatyala akrokrelayo, kunye ne-18 yokusweleka e China. Nangona kunjalo, ngokufika koNyaka oMtsha waseTshayina kunye…
I-Griffiths e-Sanaa ukudibana noHouthis
UMartin Griffiths, i-UN Special Envoy ukuya e-Yemen, ufikile namhlanje e-Sana'a ukuxoxa ngokumisa ukunyuka komkhosi kunye neendlela zokubamba umhlangano wokubonisana kwezopolitiko e-Yemeni. Umthombo weendaba kwisikhululo seenqwelomoya i-Sanaa International ...
UkuFezekiswa koSuku lweNkumbulo ngoNyaka kwiHlabathi liphela
Umongameli waseRussia u-Vladimir Putin wafika ngolwesine esenza isikhumbuzo soKhumbuzo ngeNkululeko, kwaye wahlala ecaleni kwe-Nkulumbuso yase-Israeli u-Benjamin Netanyahu. Ngaphambi koku wadibana nonina ka-Isama Isachar, umfazi obanjelwe eRussia…
Iingcali ze-UN zibiza ukuba kuPhandwe ukungena kwi-Bezos Cell phone Hacking
Iingcaphephe ze-UN ngoLwesithathu ziye zacela ukuba kwenziwe uphando malunga nokugebenga kunye nokubiwa kolwazi oluyimfihlo nolwazimeleyo kwiselfowni yomseki we-Amazon nomongameli, uJeff Bezos. Ifowuni kuthiwa iye yaqhekeka…
I-Iran isoyikisela ukurhoxa kwiNyukliya eNyukeneyo yokuNgcwala
USamuel Gush. W
Umphathiswa Wezangaphandle wase-Iran u-Mohammad Javad Zarif uthe ilizwe lakhe liza kurhoxa kwiSivumelwano sokunganyanzeleki kwezi zixhobo zeNukliya (i-NPT) ukuba abantu base-Yuropu baveze iSivumelwano se-Nuklea se-Iran kwi…
Iidemokhrasi zangoku Izityholo zokuqala kwityala lokuTyholwa kukaTrump
NgoLwesithathu, amaDemocrat aqala ukuveza izityholo zawo zokuqala kwityala le-Senate likaDonald Trump, usuku emva kweseshoni yokuphikisana ukubeka imigaqo yale nkqubo. Abemi baseRiphabliki baninzi kwi…
Ukuqeshwa koRhulumente waseRussia kutsha kukude-yintoni entsha?
Okutsha, hayi okutsha, ukuqeshwa kukaRhulumente waseRussia kwabhengezwa. Intetho kaMongameli waseRussia uVladimir Putin yalandelwa kurhoxa kwi-Nkulumbuso yaseRussia u-Dimitry Medvedev kunye nekhabhathi yakhe. UPutin unqwenela ukulungisa i…
I-Russia Ukucwangcisa ukuyila enye indlela ye-GitHub -I Russia elungileyo evela kwiNtengiso yeHlabathi
IRussia icwangcisa ukudala eyayo indawo kwi-GitHub ephethwe nguMicrosoft, inkampani yehlabathi ebonelela ngokusingathwa kophuhliso lwesoftware, ulawulo lwenguqulo kusetyenziswa iGit. IMicrosoft ifumene inkampani ngo-2018 ngeedola ezisi-7.5 yeedola.
I-Facebook ikhusela uMgaqo-nkqubo weNtengiso wezoPhulo
Pick yoMhleliUSamuel Gush. W
Kufunyenwe ubungqina bokuba inkcazo engeyiyo kunxibelelwano lweendaba zentlalo inefuthe elonyulu kunyulo luka-2016 lwase-US. Ezinye iinethiwekhi ziphendule ngokuthi zithintele intengiso yezopolitiko. I-Facebook, nangona kunjalo, itshintshile…
I-Senate yase-US ibeka iMithetho yokuLinga uTywala
I-Senate yase-United States ekuqaleni kwangoLwesithathu ekuseni, emva kweentsuku ezili-13 zokuxoxisana, yabeka imithetho yokuchotshelwa kwetyala likaMongameli waseMelika uDonald Trump. Uninzi lweRiphabliki lwala yonke imizamo yamaDemocrat ukubiza intsha…
I-Iran iqinisekisa iPlani yase-Ukraine yehliswe ziiRokethi ezimbini
Umkhosi wase-Irani wadubula abakhweli base-Ukraine abahamba ngenqwelo moya i-PS752 besebenzisa imijukujelwa emibini ukuya emoyeni emva kokuyiphatha kakubi inqwelo moya. Ngokwengxelo yesibini ekhutshwe yi-Civil Aviation Organisation yase-Iran. I…
Irekhodiwe nguWuhan Coronavirus eWashington State
Umntu omnye kwilizwe laseMelika eWashington ngowokuqala kweli lizwe ukuba afunyaniswe ukuba une-coronavirus engaqondakaliyo. Ityala laqala ukufunyanwa kwisixeko sase Wuhan, e China, apho amakhulu abantu…
IBHOKISI! IRussia Izakhiwo ezingekho semthethweni kwiJam Satellite Signals
Pick yoMhleliUChristina Kitova
IRoscosmos yafumana indlela yokufihla izinto ezabelwe ngaphakathi eRussia kunye nokuthintela iicell satellite zangaphandle ekufumaneni ulwazi ngaphakathi komda. Ngaphaya koko, abaphandi baseRoscosmos baqulunqa inkqubo yokufihla izinto ezenziwa eRashiya kwi…
I-Trump, iThunberg Clash eDavos ngaphezulu kweMozulu
Ingqungquthela yama-50 yeHlabathi yoqoqosho kwi-XNUMX yaqala ngoLwesibini eDavos, eSwitzerland, kulawulwa ziingxoxo-mpikiswano ngemicimbi ephathelele kutshintsho lwemozulu. Kunyaka wesibini ngokulandelelana, i-activist encinci yaseSweden uGreta Thunberg yayingu…
Eureka! Ithiyori Kunokubakho amanye amaCandelo kwi-Atom
Kubhengezwe umsebenzi omtsha ophathelene ne-fiziksi ngokubambisana neRussia kunye neJamani physics, malunga nokuziphatha kwee elektroni kwiiathom ezinee-isotopes zento enye. Ielectron ngamasuntsu ahlawuliswayo angalunganga ...
Ikhamera yamehlo yomqhubi wokuqala weLizwe ikuvumela ukuba ubone ngokuthe ngqo oko kubonwa ngumqhubi weemoto zobuhlanga
Kutheni ukuThengisa ngeDijithali kubalulekile kwiShishini elincinci
Pick yoMhleliAustin W
Indlela eNtsha yaseRussia eneZilungiso kuMgaqo-siseko? Okanye ngaba yayilixesha nje lika-Emperor Putin?
Ngaba izilungiso kumgaqo-siseko waseRussia zinika ithemba kwinto ephikisayo kwaye liyintoni ikamva leRussia kunye norhulumente? Ngokwenyani, iRussia ayinayo inkcaso. Inkokeli yeqela eliphikisayo u-Alexei Navalny…
Umahluko phakathi kweVisa 189 kunye neVisa 190
I-visa ezimeleyo enamakhono kwi-189 eyaziwa njenge-visa-based visa. Le Visa yeyabantu abangatyunjelwanga nguye nawuphi na umsebenzi, ilungu losapho, ilizwe okanye urhulumente. Olona ncedo luphambili loku…
Amaxwebhu eNtsha e-CIA abhengezwe aBhengeza iZazi zaMfazwe zamaNazi - iStepan bandera yaseUkraine ikuluLuhlu
I-CIA yaphosa amaxwebhu phantsi komthetho ofuna ukubhencwa kwabaphuli mthetho bemfazwe yamaNazi. I-Arhente yezobuntlola eyintloko yenkonzo yaseburhulumenteni baseMelika yaseburhulumenteni eUnited States, enikwe uxanduva…
I-Israel kwiZiko leHlabathi leSikhumbuzo seSizwe sokuBulawa kwabantu ngokuBulala
Pick yoMhleliUDavid Wexelman
I-Israyeli kule veki isembindini wehlabathi njengoko isamkela iindwendwe ezivela kwiintlanga zehlabathi ukuba zihlanganyele ndawonye kwi-International Holocaust Remikhumbuzo Day. Ukukhunjulwa kwezigidi ezithandathu zamaJuda…
Izinja zaseYurophu: Enye yeSisombululo soNgeniso soNcedo
Pick yoMhleliIzinja zaseYurophu
Sivuya kakhulu ukwazisa ngokudibanisa kwipothifoliyo kaDurig yezisombululo zotyalo-mali, izinja zaseYurophu. Yenzelwe ukuthathwa kwezahlulo ezisemgangathweni zee-European Blue Chips ezinokukhulisa umvuzo ...
7 Izixhobo eziPhezulu ze-E-Commerce eziNceda ukuguqula iindwendwe ukuba zithenge abathengi
Pick yoMhleliAdesan john
Ukuba iwebhusayithi yakho ezabalazayo ifumana ithrafikhi enkulu, kodwa inani labantu abaguqukela kubathengi lihlala lincinci, ungathatha uncedo lwezixhobo ezahlukeneyo ze-E-Commerce. Ngoku lixesha lokuba uvale onke amacala akho…
Elona Xesha liLungileyo lokurenta iApile ngo-2020
Leliphi elona xesha lifanelekileyo lokurenta indlu? Ngaba kusebusika okanye ehlotyeni? Kuqhelekile ukutsibela kwinkqubo yokucinga ukuba ubusika buya kuba yeyona nto ibiza kancinci…
Yazi ukufaneleka kwakho nge-PR e-Australia njenge-Visa Subclass 189
Ikhono elizimeleyo eliyiNqanawa 189 lithathwa njenge-visa esekwe kumanqaku kwaye le Visa yeyomsebenzi ongatyunjwanga nangayiphi na indawo okanye urhulumente, ilungu losapho okanye umsebenzi. Le Visa ikuvumela…
I-Russia ihlala isilela ngeenqwelomoya zeenqwelomoya - Ngaba ikamva lahlukile kwiPutin?
Ngokwembali, iRussia yayingenamandla malunga neemfazwe zolwandle. Ukuthatha umzekelo wedabi laseTsushima ngonyaka ka-1905. Ikwabizwa ngokuba yiMfazwe ye-Tsushima Strait kunye neMfazwe ye-Naval ye ...
IBlockchain iyitshintsha njani iMedia kunye noLonwabo?
I-blockchain kwimidiya kunye nokuzonwabisa? Ndilinde, ibingadibani nee-cryptocurrencies ezinje nge-bitcoin? Ewe kunjalo, kodwa inamandla amakhulu kunokuba sikholelwa. Kwimithombo yeendaba kunye nokuzonwabisa, inokunceda ngokunga…
Ukuphuculwa kweRhafu yokuGcina ukuHamba okuKhawulezayo kunceda abaSebenzi ukuba bajolise kwimali abayifunayo-bonisa indlela yokugcwalisa iNew2020 W-4
INkonzo yeNgeniso yeNgxelo yangaphakathi isungule i-Estimator entsha yokubamba iRhafu yokuphucula, eyenzelwe ukunceda abasebenzi ukuba bajolise kwimbuyiselo abayifunayo ngokwenza isixa esifanelekileyo serhafu yengeniso federal ikhutshwe ...
Iindaba zaseNtsundu zifikelela kwindawo ebaluleke kakhulu: Iipasile ezingama-5,000!
Pick yoMhleliIiGigs zeHlabathi eziZimeleyo
Iindaba zeKomanisi zisandula ukupapasha inqaku lakhe lesi-5,000, lishiya inqaku elimangalisayo lomxhasi kunye nokukhula kwabafundi. Ngaphezulu kwe-1,000 ababoneleli ababhalisiweyo ukuza kuthi ga ngoku, isayithi ikwanakho ngaphezu kwe-20,000 yeendwendwe ezizodwa kwaye…
Kutheni kufanele ubhatale abasebenzi umvuzo wemali okhuphisanayo?
Iiparamitha zokwamkela unikelo lomsebenzi zinokuba zizinto eziphantsi kodwa kukho into enye ethi abantu abafuna umsebenzi bahlala begcina iithebhu kwi-Mvuzo. Ngokukrola ngokuthe ngcembe kwisithuba / kwintengiso, amehlo enethemba ngokuthe ngqo…
Ukuhlaselwa kweRadiya yeRadiya yeTransband Ukuhlaselwa kwesini kweDysphoria
Ukuphinda ndibuyele kwinqaku ndilibhalileyo, uMnu. Pratt wabamba enye i-podcast enesihloko esithi "HD83: Idemokhrasi ibanga ukuba lixhoba lokugxekwa elingakhange lihlawulwe." Okokuqala, ubanga ukuba andizange ndixhoba ngenxa ye-podcast yangaphambili…
Uyifumana njani i-Visa Subclass 189 enezakhono
Ukuba i-Australia lilizwe lakho lamaphupha kwaye ufuna ukuhlala kwaye uhlale e-Australia ke i-Visa enobuhlakani ye-Visa engaphantsi kwe-189 yeyona ndlela ikhethileyo. Le Visa ikuvumela ukuba uhlale ku ...
Ndiyambulela uThixo ngokunika impilo
Abantu basithatha kancinci isipho sobomi. Ekuseni xa uvuka kufanele ubonge uThixo ngokukunika olunye usuku. Isiko lamaJuda kukusikelela uThixo impilo emva kokuya…
Ukuqalisa uhambo ukuze ube nguMongameli wekholeji
Umongameli wekholeji ukhokela ikholeji okanye eyunivesithi. Umsebenzi oqeqeshiweyo onako ukuguqula amaziko ngezakhono ezitsha kunye nobuchule, ekusombululeni ingxaki kunye nokujongana nexesha elitsha lentshukumo yomfundi uzukisiwe…
I-Greshun De Bouse: Ukulingana Kuzo Zonke I-Makes America Great
IMTFMove Day® PR
Kulungile. Ke sonke siyayazi iGreshun De Bouse yiNkosikazi yento yonke engaqhelekanga! Uncumo lwakhe lokuphumelela kwaye lukhulu kunobomi bomoya obuqinisekileyo luyosulela ngokupheleleyo! Inxalenye yoko kukwenza kakuhle kakhulu ukuzibophelela kwakhe…
Ngo-2020, Qalisa uMsebenzi wakho ngeyona Khosi iQhelekileyo yokuQeqesha kwezifundo zaseAustralia
Akukho mda wokufunda xa umncinci kwaye usekholejini. Ikharityhulamu iyandiswa, ihlaziywa kwaye iyahambelana namaxesha anamhlanje. Imfundo ayisiyonto yokufunda iikhonsepthi kuphela kodwa…
Umlo ophakathi kweeNgcinga zeLungelo lokuGcina kunye neLiberal kwiLizwe
Iimpembelelo zenkululeko eziqhubayo zichaphazela amaSilamsi ama-Orthodox, amaKhristu, amaHindu kunye namaJuda kwihlabathi liphela. Ezindabeni inqaku elithetha ngecawa yamaKatolika uPopu Benedict ulumkisa ngokuphumla komthetho wobupristi. UPopu Benedict urhoxile…
Iikhosi ze-Intanethi ezifumaneka kwi-Intanethi Uncedo lokwenza umsebenzi wakho ngcono
Ukuqhubeka nokufunda kubalulekile ukufuna amathuba amatsha kunye nokunyusa ileli yomsebenzi. Kubalulekile ukuba ufunde izakhono ezitsha, uhambe ngesantya esijikelezayo, uphuhlise izakhono zobunkokeli, kunye nokunye. Iyaqhubeka imfundo ...
I-DHX Imithombo yeendaba / i-Bond zeWildbrain, iXesha elifutshane, iNkcenkceshelo ephezulu, uTyalo-mali oluLingeneyo, uLuxhasa ngaphezulu kwe-9.5% YTM
Pick yoMhleliI-FX2 kaDurig
Kule veki, uphononongo lwebhondi lweveki kaDurig luthatha enye imbonakalo kwinkampani yaseCanada egxile kumxholo wabantwana nakwiimpawu. Usenokuba awuke uve nge-WildBrain (ngaphambili i-DHX Media), kodwa unokwazi ezinye…
IGreshun De Bouse kuBacinezeli: 'Nceda uyeke ukundibulala'
Inkokeli yethu ethandekayo yehlabathi uGreshun De Bouse unobomi obuxakekileyo nobunemveliso! Siyamthanda loo nto! Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ufunyanwa esenza uphando, ehamba esiya ezintlanganisweni kunye nabanembeko / ngezaziso, ngokubanzi ababandakanyekayo…
I-CN Ipapashwe nge-100 yeeLwimi zeHlabathi
Ngenisa ii-Aricles Apha kwaye upapashwe Kumhlaba jikelele
Khangela iindaba zeNkululeko
I-CN Uninzi lweVeki ye1
UKUGQIBELA IXESHA: Ulwimi oluPhambili lwaseTshayina oluCwangcisiweyo lubonakalisa ukuba lusekelwe ePython
Imibuzo ebuhlungu xa uvavanya iplatifomu yakho ye-E-commerce
Ukunyuka kweMarike yeAnti-Drone
I-Volkswagen ityhila isiSeko esiShumi esiSibhozo sokudibanisa iimbacu
Ukudityaniswa kweenkonzo kunye neMarike yoLawulo oludibene noTshintsho lweDigital
Iiklabhu zase-Iranian ukuya kwiBoycott AFC Champions League
INDAWO YAKHO, INDLELA YAKHO: Yakha iCloud Enterprise Yakho Ngezixhobo Ezintsha Zamafu Ezilungiso
IiGigs zeHlabathi eziZimeleyo
I-Microjob-I-Freelance Global Gigs Ixabiso eliphantsi kwiMarike
Ukukhutshwa kweendaba ezi-3 zehlabathi / amawaka eembono
Ukukhutshwa kokuShicilela kwiHlabathi Jikelele ukuBhala / ukuThengisa
INkonzo yokuHlela uLwimi lwesiNgesi kwiBanga AAA ($ 45 ngamagama ali-1,000 XNUMX)
Nyusa ishishini lakho - Amanqaku e-3 kwiilwimi ze100 ze- $ 149
I-3 (21) uMcebisi woTyalo-mali-IiNkonzo eziManyanisiweyo- Intlawulo yeFlat ye- $ 50 / IYure yokuDibana
Inqaku elihle, elibhalwe kakuhle elibhengeza ngokungakhathali ukuba ishishini lakho
Iinkonzo zeFiduciary zobuchule- $ 100 yeeyure ze-2
Shicilela i-3 yokuKhutshwa kweCawa ngaphezulu kweeveki ze-2 ze- $ 21
Shicilela i-2 yoKhuphelo lweeRekhodi ze- $ 16 - Ngaba eyona Dalali ikuyo ye-PR?
Shicilela ukuPapashwa kwakho kweendaba kwiGoogle nakwiNdaba zeNkululeko nge- $ 11!
Kuya kufuneka ubhalise njenge-CN Contibutor okanye ubhalise ukuze uphawule
UBrendan Monaghan (Abasebenzi be-CN) on U-Olê, u-Olê Mister -Ibali likaJorge Jesus kunye noFlamengos
UChristina Kitova on Iindaba zaseNtsundu zifikelela kwindawo ebaluleke kakhulu: Iipasile ezingama-5,000!
UChristina Kitova on UKUGQIBELA: I-China Yilwa I-Wuhan Coronavirus Ngokuchasene nokufika koNyaka oMtsha waseTshayina
UJared Baxter on IMakethi yeNdawo yokuThuthukiswa koLuntu iphakamisa isandla
I-MW on UKUGQIBELA: I-China Yilwa I-Wuhan Coronavirus Ngokuchasene nokufika koNyaka oMtsha waseTshayina
I-MW on I-Rheinmetall-iChampion yaseJamani ejongene neziphazamiso kwiLizwe lezoKhuselo
URocco Lewis on Itekhnoloji eNtsha yokuqhuba iMakethi yeOni yeDigital
Iibhanti zikaGordon on Stampede eSoleimani Funeral Kill 50, Injurs 212
Inqaku lomhleli we-CN
CN Indlela yokuphila
CN Malunga nathi
Amanqaku e-CN Sumit-Shicilela
I-FGG Freelance Global Gig Market Market
Imigaqo neMiqathango ye-CN
CN Yiba ngumbhalisi
CN Yiba ngumnikeli
Ubhaliso lwe-FGG njengoMnikezeli weGig Freelance
FGG Thumela i-Gig
I-GG Freelance Gloabl Gigs
FGG Amanqaku okuziqhelanisa nomsebenzi wabaqalayo
I-FGG Spanish Translation Freelance Gigs News
FGG Inguqulelo yeRussia yokuGuqulwa kweGigs Iindaba
FGG Portugueses Inguqulelo yeeFrigs zeNdawo yokuFunda
I-FGG yesiFrentshi yoGuqulelo lweFrench Gigs News
I-FGG yeTshayina yoTshintsho lweeNdawo zeGigs
CN UDonald Trump
Ukukhululeka kubuhlungu be-CN-Ukubala i-Cream, i-Gel kunye neSpray